तिम्रो दैनिक बानीले तिम्रो परिचय बनाउछ:अरस्तु - Sabal Post
तिम्रो दैनिक बानीले तिम्रो परिचय बनाउछ:अरस्तु
अरस्तु ग्रीक दार्शनिक तथा वैज्ञानिक हुन् । ग्रिसमा ३८४ बिसिमा जन्मिएका उनी एलेक्जेन्डर द ग्रेट क गुरुका रुपमा समेत प्रशिद्द छन् । उनको पश्चिमी दर्शनमा महत्वपूर्ण स्थान छ । पश्चिमी दर्शनमा सामाजिक, आर्थिक लगायतका सबै कुराहरुको व्याख्या गरेर दर्शनलाई ब्यापक बनाउने श्रेय अरस्तुलाई जान्छ । आज हामीले यहाँ उनका महान भनाईहरुलाई साभार गरेका छौ ।१. खुसि बाहिरबाट पाइने चिज होइन । त्यो हामी आफुमा नै नर्भर रहन्छ ।२. आफुलाई बुझ्नु भनेको सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्तिको पहिलो चरण हो ।
३. लडाई जित्नु ठुलो कुरा होइन, शान्ती स्थापना गर्न सक्नु महत्वपूर्ण कुरा हो ।४. तिमीले जति थाहा पाउदै जान्छौ, त्यति नै तिमीलाई थाहा हुदै जान्छ कि तिमीलाई थाहा छैन ।५. मनमा नपुगेर दिमागमा मात्र रहेको शिक्षा भनेको शिक्षा नै होइन ।६. तिमीले पाउने अवसरले होइन, तिमीले लिने निर्णयले तिम्रो गन्तव्य तय गर्छ ।७. अनुशासनले तिमीलाई स्वतन्त्रता दिन्छ ।८. तिम्रो दैनिक बानीले तिम्रो परिचय बनाउछ ।९. अँध्यारोको समयमा आफुलाई प्रकाश आएतिर केन्द्रित गर ।१०. दिमागको शक्तिले नै जीवनको सार बताउँछ ।११. तिमीले शाहस बिना संसारको कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौ ।१२. धैर्यता निकै नै कठिन हुन्छ, तर त्यसको फल त्यो भन्दा कैयौ गुणा मिठो हुन्छ ।
१३. जुन व्यक्तिले आफु भित्रको डरलाई जितेको छ, त्यो व्यक्ति स्वतन्त्र व्यक्ति हो ।१४. पिडा बिना तिमीले केहि पनि सिक्दैनौ ।१५. आफुलाई जित्नु भनेको अरुलाई जित्नुभन्दा कठिन काम हो ।१६. साथी बन्न सजिलो हुन्छ । तर मित्रता निभाउनु भनेको फल पाक्नु जत्तिकै कठिन हुन्छ ।१७. युवावस्थामा निर्माण गरिएका राम्रा बानिहरुले जीवनमा ठुलो फरक पार्छ । १८. जसलाई कुनै चिज थाहा हुन्छ, उनीहरुले त्यो गर्छन् र जसले कुनै चिजलाई बुझ्छन्, उनीहरुले त्यो अरुलाई सिकाउछन् ।१९. आशा भनेको हिडिरहने सपना हो ।२०. शिक्षाका जराहरु तिता हुन्छन्, तर फल मिठा हुन्छन् । २१. रिसाउँन जो कोहि सक्छ । तर, उचित समयमा, उचित व्यक्तिसंग, उचित कुराको लागि, उचित मात्रामा, उचित तरिकाले रिसाउने क्षमता जोकोहीमा हुदैन ।२२. ठुलो सफलताको लागी थोरै पागलपन त चाहिन्छ नै ।
नेपाल प्रहरीका सइ घुससहित समातिए
लसुन र कुखुराको मासुको मूल्य दुई गुणा…